ကျွန်တော် ရှာဖွေထားသော Windows ခွေများ (3) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows ခွေများ » ကျွန်တော် ရှာဖွေထားသော Windows ခွေများ (3)
By နေမင်းမောင်5:08 AM7 comments
Windows XP Pro SP3 OEM X86 November 13, 2010 with Driver Pack
ကျွန်တော် Windows ခွေတွေ မတင်ခင် ဘာကြောင့် OEM ကိုရွေးပြီး တင်ပေးလိုက်လည်း ဆိုတာကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဟိုတစ်နေ့က ကျွန်တော့် အကိုတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ သူက ပြောပြပါမယ် .. ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ မှာ Windows တွေတင်မယ်ဆိုရင် တွေ့ကရာ ဖြစ်ကတက်ဆန်း Windows7၊ Windows XP ဆို ပြီးရော ဆိုပြီး မတင်ဖို့ မိမိတို့ တင်မဲ့ Windows ဟာ OEM Version ကို ရွေးပြီးသုံးဖို့ ပြောပါတယ် .. ဘာကြောင့် OEM Version ကိုရွေးပြီး သုံးသင့်လည်း ဆိုတော့ OEM Version ဟာ Latop ဆိုရင် သူရဲ့လက်တော့ အမျိုးအစား Windows အမျိုးအစားလိုက် ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သလို Destop ဆိုရင်လည်း မ်ိမိတို့ Destop ရဲ့ Motherboard အမျိုးအစားအလိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows အသုံးပြုတာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ Error တွေ အများအပြား ကြုံလာခြင်း တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. သဘောကတော့ .. အမျိုးအစား တူတာကို ရွေးပြီးသုံးတဲ့အတွက် Windows တစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ် ဆိုရင် Error နည်းနည်းနဲ့ ရေရှည်မှာ Windows Error တွေကြောင့် စိတ်ညစ်စရာမလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ..
သူကတော့ အခြား Version တွေနဲ့ မတူပါဘူး။ Customer ကိုယ်တိုင် Modified လုပ်လို့ ရမယ် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ခွင့် ၇နိင်လာဖို့တွက် recomented ကို အပြည့်အ၀ သုံးခွင့်ရလာပါပီ။ ဒါပေ့မယ် Window ဆိုတာ Close Source ဆိုတာကိုတော့ မမေ့ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ၀ယ်ယူသူ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Version လို့ ခေါ်ပါတယ်။သူကတော့ ရိုးရိုး Version တွေကနေပီးတော့ တန်းပီး Upgrade လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီ Version ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ Driver တွေကို Disk image လုပ်ထားတဲ့နေရာကပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Recovery disk ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် Driver တွေကို ပြန်သွင်းယူလို့ရပါတယ်။ နောက်တခုက OEM Version မှာ Driver တွေ ကို အထူး သီးသန့် ရှာယူစရာ မလိုတာပါပဲ့။ သူမှာ့ Retail version ရဲ့ Beautiful packaged ပါဝင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် လည်းလိုအပ်လို့ လိုက်ရှာထားရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်လိုပဲ လိုအပ်တဲ့ သူတွေရှိရင်လည်း အလွယ်တကူ သုံးလို့ရအောင် ကျွန်တော် ရှာလို့ရတာလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အကုန်လုံးကို ဒေါင်းလော့ ချထားစေချင်ပါတယ် .. တကယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ် .. ဖိုင်ဆိုဒ်တွေကတော့ နည်းနည်း များပါတယ် .. Direct Link ကနေပြီး Download ချချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ရှာထားတဲ့ http://h33t.com/ ရဲ့ Link တွေကိုပဲ ကျွန်တော် ပြန်ညွန်းလိုက် ပါတော့မယ် .. Internet Connection မကောင်းလို့ အပိုင်းလိုက် ဒေါင်းလော့ချချင်တယ် တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ကျွန်တော့် ဆီမှာ နက်မကောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော့် အကိုတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီး 100 MB စီနဲ့ Ifile.it ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..အခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ ကောင်လေးကတော့ Windows XP SP3ကို Driver Pack တွေပါ တစ်ခါထဲ လိုအပ်တဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် .. ဒီကောင်လေးကတော့ Windows XP သီးသန့်ပါပဲ .. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 1.41 GB ရှိပါတယ် .. ကျွန်တော် အောက်မှာ သူရဲ့ Imformation တွေကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
THIS IS A VIRGIN COPY THAT HAS ALL CURRENT UPDATES INTEGRATED, AND WITH DRIVER PACK FINISHER. DO NOT ASK FOR A KEY!!!!!!!!!! BURN TO DVD AT 4X. IT INCLUDES INTERNET EXPLORER 8, FLASH PLAYER, WINDOWS MEDIA PLAYER 11, DOT NET FRAMEWORKS 1.1, 3.5, 4.0, DIRECT X AND MORE, PLUS DRIVER PACK FINISHER. DURING SETUP, IT WILL APPEAR TO BE STUCK AT 23 MINUTES REMAINING FOR A LONG TIME. THIS IS NORMAL, AS ALL THE EXTRAS ARE BEING INSTALLED. ALSO, UPON FIRST LOGIN, DRIVER PACKS WILL BE INSTALLED. WINDOWS WILL OPEN AND CLOSE OVER 1000 TIMES. THIS IS THE PROCESS, LET IT FINISH. PATIENCE IS A VIRTUE. THERE ARE NO TWEAKS OR PROGRAMS INCLUDED, ONLY UPDATES TO WINDOWS OR THE SOFTWARE THAT IS INCLUDED WITH WINDOWS.
KB960680 v2 - A hotfix is available to update the Slovak koruna currency symbol (Sk) to the Euro currency symbol (€) and to update the Turkish currency symbol from Yeni Türk Lirasi (YTL) to Türk Lirasi (TL)
KB972016 - n/a
KB980195 - MS10-034: Cumulative security update of ActiveX kill bits
KB982551 V2 - You cannot closeaconsole window of an application after you stop debugging the application in Visual Studio onacomputer that is running Windows XPKB982665 - MS10-055: Vulnerability in Cinepak codec could allow remote code execution
KB2279986 - MS10-078: Vulnerability in the OpenType Font (OTF) format driver could allow elevation of privilege
KB2282612 - You cannot play an AVI file in Windows XP after you install security update 975560
KB2360131 - MS10-071: Cumulative security update for Internet Explorer
Adobe Flash Player v10.1.102.64 ActiveX control
Microsoft.NET Framework 1.1 SP1 (v1.1.4322.2470) - October 2010
Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 (v3.5.30729.3644) - October 2010
Microsoft.NET Framework 4.0 (v4.0.30319.206) - October 2010
Microsoft & Windows Update v7.4.7600.229
(KB890830) Malware Removal Tool v3.13
(KB892130) Windows Genuine Advantage Validation v1.9.42.0/(KB905474) Windows Genuine Advantage Notifications v1.9.40.0
(KB931125) Root Certificate Update - October 2010
(KB955305) Microsoft Silverlight v4.0.50917.0
Key : 3b05d46a88780dc63e3122663715b574acfdcb31
Internet Connection ကောင်းလို့ ဖိုင်တစ်ခုထဲကို Direct Download ချချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ မူရင်းလင့်ကနေ သွားပြီးဒေါင်းလော့ ချလိုက်ပါ .. အဲ့ဒီအတွက် Torrent Downloader တစ်ခုခုတော့ လိုပါလိမ့်မယ် ..
တကယ်လို့ Connection မကောင်းလို့ အပိုင်းလိုက် ဒေါင်းလော့ ချချတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Ifile.it ကနေ တင်ပေးထားတာ ရှိပါတယ် .. တစ်နေ့ကို မိမိတို့2ပိုင်းရရ3ပိုင်းရရ ချထားလိုက်ပေါ့ဗျာ .. တကယ် အဖိုးတန်ပါတယ် .. အပိုင်း အားလုံးကို ဒေါင်းလော့ချပြီးပြီ ဆိုတော့မှ အပိုင်း ( 1 ) ကနေစပြီး ဖြည်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် ..
တကယ်လို့ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိရင် အောက်မှာ Comment ချန်ခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ ..
ကိုဝင်း November 13, 2011 at 11:06 AM
အဲခက်တာက key တောင်နေတယ်ခင်များ ဝင်ဒိုးတင်တဲအချိန်မှာပါခင်များ
နေမင်းမောင် November 13, 2011 at 2:21 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. ကျွန်တော် Key ပြန်ထည့်ပေးပြီးသွားပါပြီ ..
Anonymous December 3, 2011 at 3:06 AM
ကျေးဇူးအများကြီးတင် ပါတယ် ကျေးဇူးပါ ဗဟုသုတတွေ တိုးနေလို့ ပါဗျာ
Noblestars December 12, 2011 at 7:20 PM
ကျနော် part1ကနေစဖြေတာ part 2မှာerror ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောနေတယ်..ကျနော်သူ့ရဲ့ ဆိုက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ 99.1MBပဲရှိတယ် အဲဒါဘာမှားနေတာလဲအကိုလုပ်ပါဦး
နေမင်းမောင် December 13, 2011 at 4:10 AM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. အကိုအနေနဲ့ Patrt2ဆိုတဲ့ Folder ကိုရွေးပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အကို .. အဲ့ဒါမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ..
Noblestars December 13, 2011 at 5:37 PM
အကိုရေ လုပ်ပါဦး နောက်တခု ကအဆင်မပြေပြန်ဘူး keyလေ သူတောင်းထားတဲ့ boxက
KEY က 25လုံးတဲ့ အကိုပေးထားတဲ့ ကီးကအများကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပါဦးဗျာ
နေမျိုး January 15, 2012 at 5:59 PM
ကိုနေမင်းမောင်ရေ......တစ်ချက်လောက်ကူညီပါအုန်း။ အကိုပေးထားတဲ့ကီးတွေက အများကြီးဘဲ ကီးတောင်းထားတာက ၂၅ လုံးဘဲရှိတယ်အကို။အဆင်မပြေဘူးအကို။အကိုကျနော်ကိုကီးပြန်ပို့ပေးပါနော်။ကျနော်ဒုက္ခတွေ့နေလို့ တစ်ချက်လောက်ကီးပြန်တင်ပေးပါလားအကို။ကျနော်မေးထဲကိုလည်းပို့ပေးလို့ရပါတယ်အကို။ကျေးဇူးပြုပြီးကီးပြန်တင်ပေးပါနော်အကို။ကျနော်မေးလိပ်စာက elvis.presely99@gmail.com ပါ။အကို...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို....